प्राधिकरण पूर्वाग्रही कि पाइलट विजय लामा अनुशासनहीन ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
प्राधिकरण पूर्वाग्रही कि पाइलट विजय लामा अनुशासनहीन ?
१७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल एयरलाइन्सका ‘सेलिब्रिटी पाइलट’ विजय लामा निलम्बनमा परे भनेर सोमबार दिउँसो केही अनलाइनमा समाचार आए । लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा लामाको बचाउमा स्टाटसहरु ह्वार्रह्वार झर्न थाले । यद्यपि, त्यो खबर पूर्ण सत्य थिएन ।
प्राधिकरणको पछिल्लो पत्रपछि लामाले खासै प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् । अनलाइनखबरसँग उनले आफू यस विषयमा दुई दिनपछि बोल्ने बताए ।